Pakistan: Nidaamka Waxbarashada oo wax laga baddalayo
Dowladda Pakistan ayaa sheegtay in dowladda iyo Golaha Culumada Diinta ee dalkaasi ay ku raaceen in isbeddel lagu sameeyo dugsiyada iyo xarumaha lagu barto diinta Islamka, si ay ula jaan qaadaan waxbarashada casriga ah, loona xakameeyo hadalada naceybka ah iyo fikirada xag jirka.
Hadalkan ayaa ka soo yeeraray dowladda ka hor booqasho Ra’isul Wasaare Imran Khan uu ku imaanayo magaaladan Washington Isninta soo socota, isagoo la kulmaya madaxweyne Donald Trump, oo maamulkiisa uu ku hayo Pakistan cadaadis la xiriira sidii ay ula dagaalami laheyd maalgelinta kooxaha argagixisada iyo xakameynta mintidnimada.
Dowladda Pakistan ayaa diiwaan gelin doonta in ka badan 30 kun oo malcamadaha diinta lagu barta ah, oo hadda laga dhigi doono, maadooyinka Englishka, xisaabta , scienceka. Sidaasina waxaa sheegay wasiirka Federalka ee Waxbarashada ee Pakistan, Shafqat Mehmood
Waxa uu sheegay in dowladdu ay qaadi doonto imtixaanada dugsiyadan oo dufcadda ugu horeysa ay u fariisan doonaan bisha June ee sanadka soo socda.
Madarasooyinka Pakistan ayaa mudaba lagu eedeeynayay inay xoojinayeen xag jirnimada.
Marar hore oo dowladihii hore ee Pakistan soo maray ay isku dayeen inay wax ka bedelaan ayey ku guul dareysteen.